Teraka: 1 Janoary -1300
I Akenatôna na Akenatena dia faraô tao Ejipta tamin’ ny Andro Taloha tamin’ ny taona 1350 tal. J.K. hatramin’ ny 1333 tal. J.K. tany ho any, nandritra ny vanimpotoan’ ny Empira Vaovao. Nisafidy ny andriamanitra Masoandro izy hataony fivavahan’ ny fanjakàny. Tsy naharitra anefa ny androm-piainany. Teraka tamin' ny taona 1300 tal. J.K. izy
Mpanjaka faha-9 tao amin’ ny fianakaviana nanjaka (dinastia) faha-18 i Amenôfisy IV izay zanak’ i Amenôfisy III sy i Tiy. Tamin’ ny faha roa ambin’ ny folo taonany izy dia nanambady an’ i Nefertity izy. Ny anaran’ i Amenôfisy dia midika hoe "afa-po i Amôna".
Mpanompo manokana ny andriamanitra masoandro (na ny kapilan’ ny masoandro) i Amenôfisy IV, ka io andriamanitra io no ninoany ho andriamanitra tokana nahary izao rehetra izao. Tamin’ ny fahefa-taonan’ ny nanjakany dia nandidy ny tsy hivavahana afa-tsy amin’ i Atôna manerana an’ i Ejipta i Amenôfisy IV. Tsy nankasitraka izany ireo mpisoron’ ny andriamanitra Amôna-Re (na Amôna-Ra) tao amin’ ny tanànan’ i Tebay (na Teba).
Niorina vokatr’izany ny fivavahana amin’andriamanitra tokana ary niova anara-mpanjaka ho Akenatôna ("ankasirtahan’i Atôna") i Amenôfisy IV. Nafindrany tany Aketatôna (izay lasa atao hoe Tell el-Amarna ankehitriny) ny renivohitra fa tsy tany Tebay, ka tao no nanaovana ny fanompoam-pivavahana natokana ho an’i Atôna, ary nofoanany ny fivavahana amin’ireo andriamanitra maro tao Ejipta izay tokony ho nolovany tamin’ireo razany. Nataony izay tsy hampanana fahefana ny mpisorona izay niezaka ny hihazona ny fivavahana amin’i Amôna.
Nisy vokany be tamin’ ny zavakanto tany Ejipta ilay fanitsiam-pivavahana nataon’ i Akenatôna, ka nisongadia tamin’ izany ny fanehoana ny zavaboary sy ny fankalazana ny maha mahery indrindra ny Masoandro, izany hoe an’ i Atôna. Tamin’ ny fiandohan’ ny fanapahan’ i Akenatôna dia nanaraka ny toromariky ny mpanjaka ny mpanao zavakanto ka nanao izay hakana tahaka tanteraka ny zavatra ataony sary (sary hosodoko na sary sokitra). Niroborobo ny asasoratra natokana ho an’ ny firaisam-piainana amin’ ny andriamanitra Masoandro.
Rehefa maty anefa i Akenatôna dia tsy nitohy ny fivavahana tamin’ i Atôna, satria naverin’ ilay vinantony atao hoe Totankamôna indray tany Tebay (na Teba) ny renivohitra sady naveriny koa ny fivavahana amin’ andriamanitra izay nahazatra ny Ejipsiana talohan’ i Akenatôna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Akenatôna&oldid=1000586"
Voaova farany tamin'ny 21 Janoary 2021 amin'ny 11:07 ity pejy ity.